Madaxweynaha Puntland oo kulan la qaata hay’adaha Qaramada Midoobay ee ka howlgala maamulkiisa – Somali Top News
Madaxweynaha Puntland oo kulan la qaata hay’adaha Qaramada Midoobay ee ka howlgala maamulkiisa
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta 16 January 2019 xafiiskiisa ku qaabilay laamaha Hay’addaha UN-ka qaybtooda ka hawlgala Puntland, kuwaas oo kala ah UNSOM, UNICEF, UNDP, UNHABITAT, UNOCHA, UNDSS, FAO iyo WFP.
Kulanka uu Madaxweynaha Puntland la qaatay saraakiishaasi ka socdey laamaha UN-ka Puntland ayaa waxaa ku wehelinayey Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Puntland Cabdinaasir Biixi Soofe, waxaana uu ka warbiyey arrimaha muhiim ka ah ee lagaga hadlay kulanka.
“Maanta Madaxweynuhu wuxuu la kulmay Hay’addaha UN-ka qaybaha Puntland ka degan, ulajeedada uu Madaxweynuhu ula kulmayna waxa ay ahayd inuu xogogaal u ahaado shaqooyinka ay Puntland ka hayaan, waxa uu ka xog waraystay waxqabadkoodii hore iyo waxyaabaha ay damacsan yihiin in ay fuliyaan mudooyinka soo socda Insha Alla” ayuu yiri Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Puntland.
Sidoo kale Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Puntland Cabdinaasir Biixi Soofe ayaa tilmaamay in kulanka ay qayb ka ahayd in Madaxweynuhu ku dhiiri geliyo dardargelinta mashaariicda horumarineed ee ay Puntland ka wadaan, isla’ markaana u balanqaado in shaqadu u socondoonto sidii logu talagalay.
← Muxuu ahaa qorshaha dagaalyahanada Al shaabab ee weeraray Nairobi?
Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb galaya caleemo saarka Laftagareen+Sawirro →
September 19, 2019 Somali Top News 0
Taageerayaasha Trump oo Ilhan Cumar ku raadinayo ceeb iyo fadeexad culus
Jubbaland yaa uga qeyb gali doono shirka heerka sare ee Somali Partnership Forum oo Muqdisho lagu qabanayo?